I-Meteor Showers kunye nalapho bavela khona
Indlela iMeteor Showers isebenza ngayo
Ngaba uke wambona i-meteor shower? Ukuba kunjalo, ubukele iincinci ezincinane zembali yesantya yesantya, ukusasazeka kwiimetets kunye ne-asteroids (eyakha i-4.5 billion yeeminyaka eyadlulayo) iphefumula njengokuba yaphazamiseka emoyeni wethu.
Izihlandlo ezingaphezu kwembini ngonyaka, uMhlaba uhamba ngomlambo weemfucuza ezishiywe emva kwendawo nge-comet ejikelezayo (okanye ngokungaqhelekanga, ukuhlukana kwe-asteroid). Xa oku kwenzekayo, sibona iziqhuma zeemetors zikhanya ngezulu. Kubonakala ngathi zivela kwindawo enye yezulu ebizwa ngokuba "yakhazimulayo". Ezi ziganeko zibizwa ngokuba yimvula yamanzi , kwaye ngamanye amaxesha zivelisa ezininzi okanye amaninzi emifudlana yokukhanya ngeyure.
Imifudlana ye-meteroid evelisa imvula iqukethe iziqu zeqhwa, izibonda zothuli, kunye neziqwenga zamatye ubukhulu beentlanzi ezincinane. Basuka emanzini abo "njengama-home" njengoko i-nucleus ye-cometary ifika kufuphi ne-Sun ekujikelezeni kwayo. Ilanga livuselela i-nucleus ebandayo (mhlawumbi ivela kwi- Kuiper Belt okanye i- Cloud Oort ), kwaye ikhulula i-ices kunye neyadwala bits ukusabalalisa emva emva comet. (Ukubona i-nucleus ye-comet close, hlola eli bali ngeCetet 67P / Churyumov-Gerasimenko.) Ezinye iimifudlana zivela kwi-asteroids.
Umhlaba awuhlali udibanisa yonke imifudlana ye-meteoroid kummandla wayo, kodwa kukho malunga no-21 okanye ngoko-ke imilambo edibana nayo. Le yimihlaba yemithombo yamanzi eyaziwayo. Ezi zihlambuluke zenzeka xa i-debetary kunye ne-asteroid imfucala eshiywe emva koko igawula emoyeni wethu. Iziqwenga zamatye kunye nothuli ziyafudumala ngokuxubana kwaye ziqala ukukhanya. Uninzi lwe-cometary kunye ne-asteroid udoti uphela phezulu phezulu komhlaba, kwaye yiloo nto esiyibona njengoko i-meteroid idlula esibhakabhakeni sethu. Sibizela ukuba iqhube i- meteor . Ukuba iqela le-meteoroid lenzekile ukuze lisinde uhambo kwaye liwele emhlabathini, ngoko kuthiwa yi-meteorite.
Ukusuka kumhlaba imbono yethu yenza ukuba kubonakale ngathi bonke abaxhamli beeshavu abathile bavela kwinqanaba elifanayo esibhakabhakeni-elibizwa ngokuba likhazimulayo . Cinga nje ngokuba uhamba ngeloli uthuli okanye ikhefu leqhwa. Iziqulatho zothuli okanye iinqabhoko zeqhwa zivela kuwe zivela kwindawo enye kwindawo. Kuyafana kunye nemvula yamanzi.
Zama iLuck yakho kwi-Observing Meteor Showers
Nalu uluhlu lwemvula yamanzi eyenza iziganeko eziqaqambileyo kwaye ziyabonakala emhlabeni wonke unyaka.
Ii-Quadrantids: ziqala ngasekupheleni kukaDisemba kwaye ziphakame ngoJanuwari kunyaka ngamnye. Lo mjelo usenziwa ngamaqhekeza ukusuka ekuhlukeni kwe-asteroid ebizwa ngokuba yi-EH1. Ukuba izimo zilungile, ababukeleyo bangabona ngaphezu kwe-100 meteors ngeyure. Iimpawu zayo zibonakala zihamba ukusuka kwi-constellation Boötes .
AmaLyrids: aphakathi kowama-avridi e-Apreli kwaye ngokuqhelekileyo aphakame malunga ne-22. Ababonayo banokubona i-1-2 methorsors ngeyure. Abalandeli bayo babonakala bevela kwicala lakwaLyra .
Eta Aquarids: le mbhobho iqala malunga ne-20 ka-Epreli kwaye iphela ngo-Meyi ngasekupheleni kukaMeyi 5. Ingumlambo osele emva kweCetet 1P / Halley. Abaqapheli bangalindela ukubona ngaphezulu kwama-60 okanye ngoko-meteors ngeyure, kuxhomekeke kwiimeko zokujonga. Laba bantu bamehlo babonakala behamba ukusuka kwinqanaba le- Aquarius yamaqela.
I-Perseids: Le isanti eyaziwayo enokukhanya kwayo kwi-constellation Perseus . Isitya siqala malunga noJulayi kwaye siyaqhubeka ngo-Agasti kamva. Ingqungquthela ijikeleze nge-12 ka-Agasti, kwaye ungabona ukuya kwi-100 meteors ngeyure. Le ntlanzi ngumlambo oshiywe emva kwe-109P / Swift-Tuttle.
I-Orionids: Le mbazana iqala ngo-Oktobha 2 kwaye iphela ngeveki yokuqala kaNovemba, ijikeleza nge-21 Oktobha. Ukugquma kwesi saziso yi- Orion yamaqela.
ULeonids: Omnye umlambo we-meteor owaziwayo, le nto yenziwa yimfucuza ye-comet 55P / i-Tempel-Tuttle. Khangela abaxhasi bayo ukususela ngoNovemba 15 ukuya kwe-20, ngenqanaba eliphezulu ngoNovemba 18. Ukuqhaqhaqhazela kwayo yiLona yeenkwenkwezi.
I-Geminids: le mbhobho iqala malunga ne-7 kaDisemba, i-radiates esuka eGemini , kwaye ihlala malunga neveki. Ukuba iimeko zintle kakhulu, ababukeleyo bangazibona malunga nama-120 abaxhasi ngeyure.
Nangona unako ukubona amaxhwele naliphi na ixesha lobusuku, ixesha elihle lokufumana iimvula zamanzi ngokuqhelekileyo kusekuqaleni kweeyure zentsasa, ngokukhethekileyo xa iNyanga ingaphazamisi kwaye ihlamba i-dimmer meteors. Baza kubonakala besasaza esibhakabhakeni ukusuka kwicala labo elikhanyayo.
Indlela Amagnethe asebenza ngayo
Yintoni eyahluke phakathi kweScientific Hypothesis, iTheory kunye noMthetho?
Inkcubeko yaseOlmec yakudala